ခြေဖနောင့် ကွဲတတ်သူများ အတွက် ပျောက်ကင်းသည့် နည်းလမ်းလေးများ…. -
Tags: Health, အလှအပရေးရာ
ခြေဖနောင့် ကွဲတတ်သူများ အတွက် ပျောက်ကင်းသည့် နည်းလမ်းလေးများ…
ခြေဖနောင့် ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ရိုးရှင်း လွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်း ကုထုံးလေးများ
မကြာခင် တစ်မိုးကုန်လို့တစ်ဆောင်း ဝင်လာပါတော့မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူဓာတ်များသူတွေနဲ့၊ နေ့လယ်ဘက် နေပူပူထဲလမ်း လျှောက်အထွက်များသူတွေအဖို့ ဆောင်းရာသီရောက်တဲ့အခါ အပူကန်ထွက်လေ့ရှိကြပြီး ခြေဖနောင့် အရေပြားများ ကွဲအက်လာ ပါတော့တယ်။အချို့သူတွေမှာ သိပ်ဆိုး ဆိုးရွားရွားကြီးမဟုတ် အမြင်ဆိုးရုံလောက်သာ ကွဲအက်ကြသော်လည်း အချို့ကတော့ ကွဲထွက်နေသော အရေပြားအစအနတွေက တစ်ဆင့် အဝတ်အထည်နဲ့ ပွတ်တိုက်၍ အသားစလန်သွေးထွက်ကာ မေးခိုင်ပိုး အန္တရာယ် ဖြစ်စေလာနိုင်ပါတယ် …။
အသေးအဖွဲ ခြေဖနောင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် ရေချိုးတဲ့အခါ ဖနောင့်ချင်းချင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်တိုက်၍သော် လည်းကောင်း၊ ရေချိုးခန်းသမံတလင်း သို့မဟုတ် ရေချိုးခန်းသုံး ကျောက်ခဲတုံးလေးဖြင့် ပွတ်တိုက်၍သော်လည်း ကောင်း ဤသို့ပြုပေးခြင်းဖြင့် အရေပြား ချောမွေ့သွားစေပါတယ်။ အကယ်၍ ကြီးကြီးမားမား ကွဲအက်သူများ အဖို့ အရေပြားစလေးတွေကို လက်သည်းညှပ်လေးနဲ့ ညှပ်ထုတ်ပေးပြီး အောက်ပါရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံး ရှစ်မျိုးထဲမှ မိမိအတွက် အဆင်ပြေရာကိုသုံး၍ ကုစားနိုင်ပါတယ် …။
(၁) သံပရာရည်-ဆား-အလှဆီ-နှင်းဆီရည်တို့ဖြင့် ခြေဖနောင့်ပေါင်းတင်နည်း
(Glycerine (ခေါ်) သကြားဆီ၊အလှဆီနဲ rose water (ခေါ်)နှင်းဆီရည်တို့ကို အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာ အလွယ် တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်) ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဇလုံကြီးကြီးတစ်ခုထဲမှာ ခြေမျက်စေ့မြုပ်တဲ့အထိ ရေခပ်နွေးနွေးလောင်း ထည့်ပြီး ဆားကြမ်း၊ သံပရာရည်၊ အလှဆီနဲ့နှင်းဆီရည်တို့ သင့်ရုံရောထည့်၍ မိနစ် ၂ဝ လောက် ခြေထောက် နှစ် ချောင်းလုံးနှစ်စိမ်ထားပါ …။
ပြီးရင်ခြေထောက်တိုက်တဲ့ ကျောက်တုံးလေးနဲ့ ခြေဖနောင့်တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ထို့နောက် အလှဆီစားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ နှင်းဆီရည်စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ သံပရာရည်စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ေ ရာပြီး ဖနောင့်ကိုလိမ်းအိပ်ပေးပါ …။
(ကပ်စေးစေးဖြစ်စေတာကြောင့် ခြေဖနောင့်ကို အဝတ်စသန့်သန့်ဖြင့် ထုပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ခြေအိတ်စွပ်၍သော်လည်း ကောင်းအိပ်ရာဝင်ပါ) မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ပြန်ဆေးပေးလိုက်ပါ …။
ဤနည်းအတိုင်း ရက်သတ္တပတ်လောက် ခြေဖနောင့်အရေပြား ချောမွေ့လာတဲ့အထိ ဆက်လုပ်ပေးပါ …။.
(၂) ငှက်ပျောသီး-ထောပတ်သီးတို့ဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း
ငှက်ပျောသီးမှည့်တစ်လုံးကို အခွံနွှာပြီးနောက် ထောပတ်သီးမှည့် တစ်ဝက်တို့ကိုယူ၍ ကြိတ်စက်ထဲ ရောထည့်ကြိတ် မွှေပါ …။
ပြီးနောက် ရလာတဲ့အနှစ်ပျစ်ပျစ်တွေဖြင့် ခြေဖနောင့်ကို ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ (ထောပတ်သီးအစား အုန်းသီးစိမ်း တစ်ဝက်ကို သုံးနိုင်ပါတယ် …။
ထောပတ်သီးနဲ့ အုန်းသီးစိမ်းတို့ထဲမှာ အရေပြား ကွဲအက်ခြောက်သွေ့ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့အဆီဓာတ်တွေ အမြောက်အမြားပါရှိလို့အရေပြား အစိုဓာတ် ထိန်းပေးကာ၊ နူးညံ့ချောမွေ့ လာစေပါတယ်)အကယ်၍ ထောပတ်သီးဝယ်ဖို့အဆင်မပြေပါက ငှက်ပျောသီး တစ်မျိုးတည်းဖြင့် ပေါင်းတင်လို့ ရပါတယ် …။
ငှက်ပျော သီးမှည့်မှည့်ကို အခွံနွှာ၍ အထဲကအနှစ်တွေဖြင့် ခြေဖနောင့်ကို ပွတ်လိမ်းပေးပြီးနောက် ၁ဝ မိနစ် အကြာမှာ ရေအေးဖြင့် ဆေးကြောပေးလိုက်ပါ …။
(၃) ဆန်မှုန့်-ပျားရည်-ရှာလကာရည်တို့ဖြင့် ပေါင်းတင်နည်း
(ဤနည်းက အရေပြားဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်) ဆန်မှုန့်စားပွဲတင်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းမောက်မောက်ကို ပျားရည်စားပွဲတင်ဇွန်း သုံးဇွန်း၊ ရှာလကာရည် စားပွဲတင်ဇွန်းသုံးဇွန်းတို့နဲ့ ရောမွှေပါ …။
(သံလွင်ဆီရနိုင်ပါက စားပွဲတင် ဇွန်းတစ်ဇွန်း ရောထည့်ပေးပါ) ရေနွေးနွေးလေးထဲမှာ ၁ဝ မိနစ်လောက် ခြေထောက်စိမ်ထားပြီးနောက် စောစောက ရောနှောထားတဲ့ ဆန်မှုန့်အနှစ်များနဲ့ခြေဖနောင့်ကိုပွတ်လိမ်းပေးပါ …။
(အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကြောင့် ကွဲအက်လာတဲ့ခြေဖနောင့်တွေကို ဟင်းရွက်ဆီက ကောင်းစွာကုသပေးနိုင်ပါတယ်) ညအိပ် ရာမဝင်ခင် ဦးစွာခြေဖနောင့်ကို ဆပ်ပြာနဲ့သန့်စင်အောင်ဆေး၊ ရေခြောက်အောင် သုတ်ပြီးတော့ ဟင်းရွက်ဆီဖြင့် အထဲထိစိမ့်ဝင်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် ဖိလိမ်းပေးပါ …။
(ခြေဖနောင့်ကို အဝတ်စသန့်သန့်ဖြင့်ထုပ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ခြေအိတ်စွပ်၍ သော်လည်းကောင်း အိပ်ရာဝင်ပါ) မနက်မိုးလင်းတဲ့အခါ ပုံမှန်ရေချိုးပေးလိုက် ရုံပါပဲ …။
ဤနည်းအတိုင်း ရက်သတ္တပတ်လောက် ခြေဖနောင့်အရေပြား ချောမွေ့လာတဲ့အထိ ဆက်လုပ်ပေးပါ …။
ပျားရည်က အစိုဓာတ်ထိန်းပေးတဲ့အပြင် ပိုးသေစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိလို့ ခြေဖနောင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် အသုံးတည့် လှပါတယ် …။
ရေပုံးထဲ ရေခပ်နွေးနွေး ထက်ဝက်ခန့်ထည့်ပြီး ပျားရည်ကို လက်ဖက်ရည်ခွက်တစ်ခွက် စာပမာဏခန့် ထည့်ရောပေးပါ …။
ထိုအရောအနှောထဲကို ခြေထောက်နှစ်၍ မိနစ် ၂ဝ လောက်စိမ်ထားပါ …။
ပြီးရင် ရေချိုးခန်းသုံး ကျောက်တုံးလေးနဲ့ ခြေဖနောင့်ချောသွားအောင် ပွတ်တိုက်ပေးပါ …။
(သံလွင်ဆီက အရေပြား ကျန်းမာချောမွေ့စေတဲ့ အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်း သမားတော်လေးပါပဲ) ဒီနည်းက နေ့ဘက် မှာလည်း လိမ်းပေးလို့ရပါတယ် …။
ဝါဂွမ်းလုံးလေးပေါ် သံလွင်ဆီဆွတ် လိမ်းပေးပြီးနောက် အသားထဲ စိမ့်ဝင်အောင် ခြေဖနောင့်ပေါ်ကို ထိုဝါဂွမ်းလေးနဲ့စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန် ၁၅ မိနစ်ခန့်လိမ်းပေးပါ …။
နောက် တစ်နာရီခန့်အကြာမှာတော့ သုံးနေကျဆပ်ပြာဖြင့် ရေဆေးလိုက်ရုံပါပဲ။ (နောက်တစ်နည်း) ပုလင်းသန့်သန့် တစ်လုံးထဲမှာ သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းကို သံပရာရည် အနည်းငယ်ညှစ်ထည့်ပြီး ရေအေးအေး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းထည့်၍ ပုလင်း ပြန်ဖုံး ကာနာနာ ခလောက်ပါ။ ရလာတဲ့ ထိုကရင်မ်ကို ခြေဖနောင့်ပေါ် နေ့ရောညပါ လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ် …။
(နှမ်းဆီဟာ ခြေဖနောင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးရည်ဖြစ်တယ်လို့ ရှေးမြန်မာလူကြီးများက ဆိုထား ကြပါတယ်) နှမ်းဆီနဲ့ကွဲအက်နေတဲ့ ခြေဖနောင့်ကို ညအိပ်ရာမဝင်ခင် လူးနယ်နှိပ်ပေးရုံပါပဲ …။
(၈) ကွမ်းရွက်စိမ်းနှင့် ဆားကြမ်း
(ဒီနည်းကလည်း ခြေဖနောင့်ကွဲအက်ခြင်းအတွက် မိရိုးဖလာကုသနည်းလေးပါပဲ) နေ့စဉ်ရေမချိုးမီ သို့မဟုတ် ညအိပ်ရာမဝင်မီ ဒူးခေါင်းမှခြေဖဝါးအထိ စင်ကြယ်စွာ ရေဆေးပြီး ကွမ်းရွက်စိမ်း ရင့်ရင့်ကို လက်ဖြင့်ချေ၍ ဆားကြမ်းတို့ကာ ခြေဖဝါးကိုပွတ်တိုက ပေးခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်း သွားပါ လိမ့်မယ်နော် …။ ။
ခွဖေနောငျ့ ကှဲတတျသူမြား အတှကျ ပြောကျကငျးသညျ့ နညျးလမျးလေးမြား….
ခွဖေနောငျ့ ကှဲအကျခွငျးအတှကျ ရိုးရှငျး လှယျကူတဲ့ အိမျတှငျး ကုထုံးလေးမြား
မကွာခငျ တဈမိုးကုနျလို့တဈဆောငျး ဝငျလာပါတော့မယျ။ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူဓာတျမြားသူတှနေဲ့၊ နလေ့ယျဘကျ နပေူပူထဲလမျး လြှောကျအထှကျမြားသူတှအေဖို့ ဆောငျးရာသီရောကျတဲ့အခါ အပူကနျထှကျလရှေိ့ကွပွီး ခွဖေနောငျ့ အရပွေားမြား ကှဲအကျလာ ပါတော့တယျ။အခြို့သူတှမှော သိပျဆိုး ဆိုးရှားရှားကွီးမဟုတျ အမွငျဆိုးရုံလောကျသာ ကှဲအကျကွသျောလညျး အခြို့ကတော့ ကှဲထှကျနသေော အရပွေားအစအနတှကေ တဈဆငျ့ အဝတျအထညျနဲ့ ပှတျတိုကျ၍ အသားစလနျသှေးထှကျကာ မေးခိုငျပိုး အန်တရာယျ ဖွဈစလောနိုငျပါတယျ …။
အသေးအဖှဲ ခွဖေနောငျ့ကှဲအကျခွငျးအတှကျ ရခြေိုးတဲ့အခါ ဖနောငျ့ခငျြးခငျြး ခပျကွမျးကွမျးပှတျတိုကျ၍သျော လညျးကောငျး၊ ရခြေိုးခနျးသမံတလငျး သို့မဟုတျ ရခြေိုးခနျးသုံး ကြောကျခဲတုံးလေးဖွငျ့ ပှတျတိုကျ၍သျောလညျး ကောငျး ဤသို့ပွုပေးခွငျးဖွငျ့ အရပွေား ခြောမှသှေ့ားစပေါတယျ။ အကယျ၍ ကွီးကွီးမားမား ကှဲအကျသူမြား အဖို့ အရပွေားစလေးတှကေို လကျသညျးညှပျလေးနဲ့ ညှပျထုတျပေးပွီး အောကျပါရိုးရှငျးလှယျကူတဲ့ အိမျတှငျးကုထုံး ရှဈမြိုးထဲမှ မိမိအတှကျ အဆငျပွရောကိုသုံး၍ ကုစားနိုငျပါတယျ …။
(၁) သံပရာရညျ-ဆား-အလှဆီ-နှငျးဆီရညျတို့ဖွငျ့ ခွဖေနောငျ့ပေါငျးတငျနညျး
(Glycerine (ချေါ) သကွားဆီ၊အလှဆီနဲ rose water (ချေါ)နှငျးဆီရညျတို့ကို အလှကုနျပစ်စညျးဆိုငျတှမှော အလှယျ တကူဝယျယူနိုငျပါတယျ) ညအိပျရာမဝငျခငျ ဇလုံကွီးကွီးတဈခုထဲမှာ ခွမေကျြစမွေု့ပျတဲ့အထိ ရခေပျနှေးနှေးလောငျး ထညျ့ပွီး ဆားကွမျး၊ သံပရာရညျ၊ အလှဆီနဲ့နှငျးဆီရညျတို့ သငျ့ရုံရောထညျ့၍ မိနဈ ၂ဝ လောကျ ခွထေောကျ နှဈ ခြောငျးလုံးနှဈစိမျထားပါ …။
ပွီးရငျခွထေောကျတိုကျတဲ့ ကြောကျတုံးလေးနဲ့ ခွဖေနောငျ့တှကေို ခပျကွမျးကွမျး ပှတျတိုကျပေးပါ။ ထို့နောကျ အလှဆီစားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျး၊ နှငျးဆီရညျစားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျး၊ သံပရာရညျစားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျးတို့ေ ရာပွီး ဖနောငျ့ကိုလိမျးအိပျပေးပါ …။
(ကပျစေးစေးဖွဈစတောကွောငျ့ ခွဖေနောငျ့ကို အဝတျစသနျ့သနျ့ဖွငျ့ ထုပျ၍သျောလညျးကောငျး၊ ခွအေိတျစှပျ၍သျောလညျး ကောငျးအိပျရာဝငျပါ) မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ ပွနျဆေးပေးလိုကျပါ …။
ဤနညျးအတိုငျး ရကျသတ်တပတျလောကျ ခွဖေနောငျ့အရပွေား ခြောမှလေ့ာတဲ့အထိ ဆကျလုပျပေးပါ …။.
(၂) ငှကျပြောသီး-ထောပတျသီးတို့ဖွငျ့ ပေါငျးတငျနညျး
ငှကျပြောသီးမှညျ့တဈလုံးကို အခှံနှာပွီးနောကျ ထောပတျသီးမှညျ့ တဈဝကျတို့ကိုယူ၍ ကွိတျစကျထဲ ရောထညျ့ကွိတျ မှပေါ …။
ပွီးနောကျ ရလာတဲ့အနှဈပဈြပဈြတှဖွေငျ့ ခွဖေနောငျ့ကို ပှတျလိမျးပေးပါ။ (ထောပတျသီးအစား အုနျးသီးစိမျး တဈဝကျကို သုံးနိုငျပါတယျ …။
ထောပတျသီးနဲ့ အုနျးသီးစိမျးတို့ထဲမှာ အရပွေား ကှဲအကျခွောကျသှခွေ့ငျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့အဆီဓာတျတှေ အမွောကျအမွားပါရှိလို့အရပွေား အစိုဓာတျ ထိနျးပေးကာ၊ နူးညံ့ခြောမှေ့ လာစပေါတယျ)အကယျ၍ ထောပတျသီးဝယျဖို့အဆငျမပွပေါက ငှကျပြောသီး တဈမြိုးတညျးဖွငျ့ ပေါငျးတငျလို့ ရပါတယျ …။
ငှကျပြော သီးမှညျ့မှညျ့ကို အခှံနှာ၍ အထဲကအနှဈတှဖွေငျ့ ခွဖေနောငျ့ကို ပှတျလိမျးပေးပွီးနောကျ ၁ဝ မိနဈ အကွာမှာ ရအေေးဖွငျ့ ဆေးကွောပေးလိုကျပါ …။
(၃) ဆနျမှုနျ့-ပြားရညျ-ရှာလကာရညျတို့ဖွငျ့ ပေါငျးတငျနညျး
(ဤနညျးက အရပွေားဆဲလျအသမြေားကို ဖယျရှားပေးပါတယျ) ဆနျမှုနျ့စားပှဲတငျဇှနျး နှဈဇှနျးမောကျမောကျကို ပြားရညျစားပှဲတငျဇှနျး သုံးဇှနျး၊ ရှာလကာရညျ စားပှဲတငျဇှနျးသုံးဇှနျးတို့နဲ့ ရောမှပေါ …။
(သံလှငျဆီရနိုငျပါက စားပှဲတငျ ဇှနျးတဈဇှနျး ရောထညျ့ပေးပါ) ရနှေေးနှေးလေးထဲမှာ ၁ဝ မိနဈလောကျ ခွထေောကျစိမျထားပွီးနောကျ စောစောက ရောနှောထားတဲ့ ဆနျမှုနျ့အနှဈမြားနဲ့ခွဖေနောငျ့ကိုပှတျလိမျးပေးပါ …။
(အရပွေားခွောကျသှခွေ့ငျးကွောငျ့ ကှဲအကျလာတဲ့ခွဖေနောငျ့တှကေို ဟငျးရှကျဆီက ကောငျးစှာကုသပေးနိုငျပါတယျ) ညအိပျ ရာမဝငျခငျ ဦးစှာခွဖေနောငျ့ကို ဆပျပွာနဲ့သနျ့စငျအောငျဆေး၊ ရခွေောကျအောငျ သုတျပွီးတော့ ဟငျးရှကျဆီဖွငျ့ အထဲထိစိမျ့ဝငျအောငျ စိတျရှညျရှညျဖွငျ့ ဖိလိမျးပေးပါ …။
(ခွဖေနောငျ့ကို အဝတျစသနျ့သနျ့ဖွငျ့ထုပျ၍ သျောလညျးကောငျး၊ ခွအေိတျစှပျ၍ သျောလညျးကောငျး အိပျရာဝငျပါ) မနကျမိုးလငျးတဲ့အခါ ပုံမှနျရခြေိုးပေးလိုကျ ရုံပါပဲ …။
ဤနညျးအတိုငျး ရကျသတ်တပတျလောကျ ခွဖေနောငျ့အရပွေား ခြောမှလေ့ာတဲ့အထိ ဆကျလုပျပေးပါ …။
ပြားရညျက အစိုဓာတျထိနျးပေးတဲ့အပွငျ ပိုးသစေတေဲ့ အစှမျးသတ်တိရှိလို့ ခွဖေနောငျ့ကှဲအကျခွငျးအတှကျ အသုံးတညျ့ လှပါတယျ …။
ရပေုံးထဲ ရခေပျနှေးနှေး ထကျဝကျခနျ့ထညျ့ပွီး ပြားရညျကို လကျဖကျရညျခှကျတဈခှကျ စာပမာဏခနျ့ ထညျ့ရောပေးပါ …။
ထိုအရောအနှောထဲကို ခွထေောကျနှဈ၍ မိနဈ ၂ဝ လောကျစိမျထားပါ …။
ပွီးရငျ ရခြေိုးခနျးသုံး ကြောကျတုံးလေးနဲ့ ခွဖေနောငျ့ခြောသှားအောငျ ပှတျတိုကျပေးပါ …။
(သံလှငျဆီက အရပွေား ကနျြးမာခြောမှစေ့တေဲ့ အကောငျးဆုံး အိမျတှငျး သမားတျောလေးပါပဲ) ဒီနညျးက နဘေ့ကျ မှာလညျး လိမျးပေးလို့ရပါတယျ …။
ဝါဂှမျးလုံးလေးပျေါ သံလှငျဆီဆှတျ လိမျးပေးပွီးနောကျ အသားထဲ စိမျ့ဝငျအောငျ ခွဖေနောငျ့ပျေါကို ထိုဝါဂှမျးလေးနဲ့စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဌာနျ ၁၅ မိနဈခနျ့လိမျးပေးပါ …။
နောကျ တဈနာရီခနျ့အကွာမှာတော့ သုံးနကေဆြပျပွာဖွငျ့ ရဆေေးလိုကျရုံပါပဲ။ (နောကျတဈနညျး) ပုလငျးသနျ့သနျ့ တဈလုံးထဲမှာ သံလှငျဆီ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးကို သံပရာရညျ အနညျးငယျညှဈထညျ့ပွီး ရအေေးအေး လကျဖကျရညျဇှနျး နှဈဇှနျးထညျ့၍ ပုလငျး ပွနျဖုံး ကာနာနာ ခလောကျပါ။ ရလာတဲ့ ထိုကရငျမျကို ခွဖေနောငျ့ပျေါ နရေ့ောညပါ လိမျးပေးနိုငျပါတယျ …။
(နှမျးဆီဟာ ခွဖေနောငျ့ကှဲအကျခွငျးအတှကျ အကောငျးဆုံး ဆေးရညျဖွဈတယျလို့ ရှေးမွနျမာလူကွီးမြားက ဆိုထား ကွပါတယျ) နှမျးဆီနဲ့ကှဲအကျနတေဲ့ ခွဖေနောငျ့ကို ညအိပျရာမဝငျခငျ လူးနယျနှိပျပေးရုံပါပဲ …။
(၈) ကှမျးရှကျစိမျးနှငျ့ ဆားကွမျး
(ဒီနညျးကလညျး ခွဖေနောငျ့ကှဲအကျခွငျးအတှကျ မိရိုးဖလာကုသနညျးလေးပါပဲ) နစေ့ဉျရမေခြိုးမီ သို့မဟုတျ ညအိပျရာမဝငျမီ ဒူးခေါငျးမှခွဖေဝါးအထိ စငျကွယျစှာ ရဆေေးပွီး ကှမျးရှကျစိမျး ရငျ့ရငျ့ကို လကျဖွငျ့ခြေ၍ ဆားကွမျးတို့ကာ ခွဖေဝါးကိုပှတျတိုက ပေးခွငျးဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျး သှားပါ လိမျ့မယျနျော …။ ။
ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် စိတ်မကြည်ခြင်းအတွက် အလွယ်လုပ် ဆေးဖက်ဝင် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း
[Zawgyi] ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် စိတ်မကြည်ခြင်းအတွက် အလွယ်လုပ် ဆေးဖက်ဝင် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ခေါင်းမကြည်ခြင်းအတွက် ဆေးဖက်ဝင် စပါးလင် ရေနွေးကြမ်း ဟင်းချက်ရာမှာ ထည့်သုံးဖို့ စပါးလင်ကို ဈေးကဝယ်လာပြီးသောအခါ အပေါ်ပိုင်းကို ဖြတ်ပြီး လွှင့်ပြစ်လိုက်တတ်ကြတာ အများစုပါ။ နောက်ဆို မလွှတ်ပြစ်ပဲ ဒီလိုလေးစမ်းကြည့်ပါ။ ဖြတ်ထားတဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို ရေသေချာဆေး၊ ခေါက်တုံ့လေးစုပြီး ချည်လိုက်ပါ။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူ တစ်အိုးထဲ ပုံမှန်အတိုင်း လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ပြီးရင် ချည်ထားတဲ့ စပါးလင်ကိုထည့်ပါ။ ရေနွေးတစ်အိုးဆိုရင် စပါးလင်တစ်ချောင်းဆို လုံလောက်တယ်။ ဒီထက်ပိုထည့် တာကိုကြိုက်လဲ ပိုထည့်ပေါ့။ လက်ဖက်ခြောက်ကျပြီဆိုရင် ရေနွေးပူပူလေးကိုမှုတ်ပြီးသောက်၊ စပါးလင်နံ့ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ခံတွင်းလဲ ရှင်းတယ်။ တော်ယုံ ခေါင်းမူး …
This Month : 31891
This Year : 203117
Total Users : 498250
Total views : 2054547